Wararka - 5 Waxyaabaha Baakadaha Dabeecadda / Cunnada Dabiiciga ah Ay Tahay Inay Sameeyaan
5 Waxyaabaha Baakadahaaga Cunnada / Cunnada Dabiiciga ah Ay Tahay Inay Sameyso
Baakadaha alaabadaadu badanaa waa isdhexgalka ugu horreeya ee iibsaduhu la leeyahay astaantaada. Sideed ku ogaan kartaa inay saamaynta ugu badan ku yeelanayso? Hoos waxaa ku yaal 5 waxyaabood oo baakadahaaga dabiiciga / dabiiciga ah ay tahay inay sameeyaan si ay u noqdaan wax weyn, oo aan fiicnayn oo keliya.
1. Ka ilaali sheygaaga xaalufka iyo wasakheynta.
Waxyaabaha tirada ugu badan ee baakidhku u sameeyo shey kasta ayaa ah badbaadin iyadoo la siinayo caqabad u dhexeysa badeecada iyo wasakheynta dibadda. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay alaabooyinka u nugul qayilaadda iyo sidoo kale alaabooyinka loo sameeyay inay 'ka xor ahaadaan' qayb ka mid ah xasaasiyadda ama sababo caafimaad awgood. Joogtaynta sharafta badeecada iyadoo la adeegsanayo baakadaha caqabada ayaa noqotay mid aad u muhiim ah maaddaama noocyada alaabtan ay la kulmaan dalab kordhay.
2. In kor loo qaado nolosha alaabada.
Marka laga hadlayo alaabada dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ee badanaa aan ku jirin shey ilaaliya, baakaduhu waa inay qabtaan waajibaadka saaran: Ma aha oo kaliya inay ka ilaaliso wasakhda bey'ada ee xirmada laakiin waa inay ilaalisaa jawiga saxda ah ee ku jira xirmada. Alaabada kaladuwan waxay ubaahantahay qeexitaanno kaladuwan oo deegaanka ah si loo kordhiyo nolosha shelf. Ikhtiyaarro ayaa jira maanta oo ku jira baakadaha u oggolaanaya shirkadaha inay abuuraan oo ilaaliyaan jawi sax ah oo ku jira xirmooyinkooda si ay u hagaajiyaan nolosha sheyga.
3. Gaadhsii sumaddaada iyo fariintaada.
Ka sokow shaqeynta saxda ah, baakadaha waa inay sidoo kale si sax ah u matalaan magacaaga, farriintaada, qiyamkaaga, iyo sheekadaada. Noocyada baakadaha ee bixiya aagga ugu sarreeya ee garaafyada iyo suuqgeynta waxay u dhaqmaan sidii safiirkooda u gaarka ah, iyo inta badan iibiyahooda.
4. Sii sahlanaato adeegsiga dhamaadka.
Macaamiisha maanta jira dhammaantood waxay ku saabsan yihiin alaabooyin ku habboon oo dhammaystiraya oo kor u qaadaya qaab nololeedkooda mashquulka badan. Waxay rabaan alaabooyinka ku jira baakadaha oo jilicsan, iftiin leh, la qaadi karo, oo bixiya ikhtiyaarro ku habboon sida ilmo-jeexjeexyada iyo dib-u-soocelinta jiifka
5. Awood u yeelo wax soo saarka ugu badan.
Ma ku khasaarisaa wax soo saar badan sababtoo ah buuxinta xirmada oo aan sax ahayn ama xirmooyin xirmo khaldan / dillaac ah? Ma adag tahay in si dhakhso leh kor loogu qaado wax soo saarka markii aad hesho amar ballaaran? Ma kugu adag tahay inaad si sax ah u saadaaliso oo aad ugu qoondayso ilaha wax soo saarka? Macaamiishaadu ma haystaan ​​waqti ay ku sugaan gadaal gadaal, umana dulqaadan doonaan baakadaha waxyeellaynaya. Markaa dooro qaab xirmo oo dheellitiraya bilicsanaanta iyo waxtarka wax soo saarka.
6. Koorsooyinka Premade-ka ee Guusha
Jawalooyinka isdabajoogga ah ee istaagga-istaaga waxay bixiyaan dhammaan waxyaabaha kor ku xusan iyo in ka badan. Foomkan baakadaha soo jiidan ee dareenka leh wuxuu bixiyaa:
Adeegsiga agab waara oo bey'ada ku dhisan
Xirmo u baahan dhaqaalo yar si loo abuuro, loo keydiyo, loona raro
Shiraac weyn oo loogu talagalay suuq-geynta, oo siinaya aragti ah wax soo saar tayo sare leh oo casri ah
Baakad taagan oo aan la caawinin, oo u shaqeysa sidii boorarkeeda u gaarka ah
Ikhtiyaarrada ku-habboon ee adeegsadaha dhammaadka ah sida jiinyeerrada iyo astaamaha ilmada
Ilaalinta ugu badan ee badeecadaada dabiiciga / dabiiciga ah ee loogu talagalay nolosha ugu fiican
Fursadaha qalabka baakadaha xawaaraha sare leh
Rotary Buuxin iyo Kuxiran Miisaanka Tooska ah ee Granules
Ku habboon maaddada gariinka, sida abuurka Xabxabka, lowska, nacnaca, Sabiibka, sonkorta, cusbada, digirta Qaxwada, buskudka, macdanta 'monosodium glutamate' iyo kuwa kale oo adag oo si toos ah u baakadeeya.
Boorsooyinka hor-taagan, oo sidoo kale loo yaqaan Doypacks, ayaa si firfircoon u carqaladeeyay warshado badan, min maraq iyo cunno fudud ilaa qaxwo iyo cabitaanno. Waa waqtigii la tixgelin lahaa waxa qaabkan baakadaha hal-abuurka ahi u qaban karo wax soo saarkaaga, wax soo saarkaaga, iyo khadka hoose. Baro wax badan oo ku saabsan mashiinada si aad ugu xirxirto boorsooyinka hore ee Gaoge
Waqtiga boostada: Dec-25-2020